आज कुन देशको विनिमयदर कति छ ? हे'र्नुहोस् -
Homeसमाचारआज कुन देशको विनिमयदर कति छ ? हे’र्नुहोस्
May 5, 2021 admin समाचार 294
बुधबार अमेरिकी डलरस’हित अन्य देशको विनि’मयदर केही घटबढ भएको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनि’मयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको ख’रिददर १ सय १७ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १८ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकि’एको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको ख’रिददर ९० रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ ।
एक साउदी रि’यालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा तो’किएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५३ पैसा तो’किएको छ ।
एक युरोको ख’रिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । एक मले’सिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ५९ पैसा तो’किएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै को’रियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ५४ पैसा तोकि’एको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६३ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६४ रुपैयाँ ४८ पैसा तो’किएको छ।
त्यस्तै जा’पानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ८३ पैसा तोकिएको छ । एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १२ रुपैयाँ ६६ पै’सा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १४ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ। एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९१ रुपैयाँ २ पैसा तो’किएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९३ रुपैयाँ १ पैसा तोकिएको छ।
January 12, 2021 admin समाचार 2635
December 13, 2020 admin समाचार 3406
October 27, 2020 admin समाचार 5036
ओख’रलाई हामी अन्य फ’लफूल झै खाने गर्दैनौ । यसलाई तिहारमा भाइ’मसला प्रयोग गरिन्छ । यो स्वास्थ्य’बर्धक फल हो । तर यसको गुणबारे जान’कारी नहुदाँ यसको उपभो’ग कमै मात्र मानिस गर्दछन् । ओखरले हाम्रो दि’मागको वृत्ति’विकासमा